Lamaane ka quustay caruur oo laba mataana ah ay u dhashen iyaga oo gaboobay (DAAWO SAWIRRADA). - iftineducation.com
iftineducation.com – Antonia Leticia Asti oo ah haweeney u dhalatay dalka Baraasiil ayaa waxa ay dhashay laba caruur ah oo mataana ah iyada 61 sano jirta.
Haweeneydaan iyo seygeeda oo wax badan caruur hamuun u qabay ayaa waxa ay aad ugu farxeen caruurta ay heleen.
José César Asti, oo 55-sano jir ah waa aabaha caruurtaan mataanaha ah waxa uuna sheegay in dhowr mar oo ay isku dayeen in ay bacrimin sameeyaan ay guul dareesteen, hasa yeeshe ay Allah mahadii ay tahay in ay riyadoodii gaareen oo markaan ay waalidiin yihiin.
Mataanahaan oo ah gabar iyo wiil waxaa lookala bixiyay Sofia iyo Roberto, waxaana lasheegay in Isbitaalkii lagu dhalay oo lagu magacaabo Sao Lucas Hospital kuna yaalla Santos ay kujiri doonaan ilaa daqaatiirtu ay ku amrayaan In labixi karo.